Group-ka C ee Koobka Adduunka Dumarka 2019 oo la soo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO – Gool FM
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Deportivo Alaves…(Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)
“Waxaan ka qoomameeyay inaan caawiyay Luis Suárez”
Agustí Benedito oo niyadjabiyay taageerayaasha Barcelona kaddib markii uu ka hadlay arrimo la xiriira Messi
Maxaad ka taqaanaa xiddigihii ugu wanaagsanaa ee ka soo qalin jabiyay kulyadda caanka ah ee La Masia?… (Magacyo aadan fileyn oo ku jira 25-ka ugu sarreeya)
Group-ka C ee Koobka Adduunka Dumarka 2019 oo la soo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO
Haaruun June 18, 2019
(Paris) 18 Juunyo 2019. Waxaa goordhow la soo gabagabeeyey Group-ka C ee Koobka Adduunka Dumar 2019, iyadoo la xaqiijiyey kooxaha ee ka soo baxay Guruubkan.
Haddii aynu ku horreyno kulan adag ayaa waxa uu dhexmaray xulalka Talyaaniga iyo Brazil, waxaana 1-0 ku adkaaday gabdhaha Brazil.
Kulan u dhexeeyey xulalka Italy iyo Brazil ayaa qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Qeybtii labaad markii dib la isugu soo laabtay xulka Brazil ayaa la yimid goolka qura ee ay ku adkaadeen kulankan waxaana 74’daqiiqo rigoore loo dhigay gool u rogtay Marta, sidaas ayaana looga adkaaday gabdhaha Talyaaniga 1-0.
Dhinaca kale kulan ka tirsanaa isla guruubkan C ayaa waxa ay gabdhaha Australia xasuuqeen dhiggooda Jamaica, iyagoo kaga adkaaday 4-1.
Afarta gool ee kulankan waxaa xulka Australia u dhalisay gabadha lagu magacaabo Sam Kerr iyadoo min labo gool kala dhalisay labadii qeybood ee ciyaarta, taasoo ka dhigan in Jamaica looga adkaaday 4-1.
Haddaba xulalka Italy, Australia iyo Brazil ayaa ka soo baxay guruubkan C maadaama ay wada leeyihiin min 6-dhibcood, waxaana kaalinta koowaad farqiga goolasha ugu soo baxay gabdhaha Italy.
Sidee ayey u muuqan doontaa SHAXDA kooxda Barcelona haddii lagu daro De Jong, De Ligt iyo Griezmann??